Gebagebadii Tababarka Saxafiyiinta, Safiirka UK iyo Xoghayaha Guud ee SJS ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay ka qaybgalayaasha | Onkod Radio
Gebagebadii Tababarka Saxafiyiinta, Safiirka UK iyo Xoghayaha Guud ee SJS ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay ka qaybgalayaasha
#Muqdisho (Onkod Radio ) – 26 May 2022 – Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SJS, ayaa soo gebagebeeyay tababar socday labo maalmood oo ku saabsanaa amniga, badqabka iyo kor u qaadidda anshaxa Saxafiyiinta ee magaalada Muqdisho, oo ay taageertay safaaradda Britain ee Muqdisho Talaadadii.
Soddon wariye, oo ka kala socday dowlad goboleedyada Soomaaliya oo dhan iyo sidoo kale kuwa laga soo kala xulay xarumaha warbaahinta ee caasimadda Muqdisho, ayaa ka faa’ideystay tababarkan oo socday intii u dhaxeysay 23 – 24-kii May. Mawduucyada lagu soo qaatay tababarka ayaa waxaa ka mid ahaa: Badbaadada iyo badbaadada saxafiyiinta, xeerka anshaxa saxaafadda iyo habka xilkasnimada leh ee loo tebiyo xilliga aafooyinka, badqabka dhijitaalka ah, qiimeynta halista iyo qorsheynta meeleynta wariyeyaasha gudaha iyo sidoo kale sheeko dhijitaal ah: Farsamooyinka iyo qalabka lagu guuleysto sheeko-sheekeysiga.
Tababarkan oo socday muddo labo maalmood ah, ayaa waxaa saxafiyiinta kala qeyb galay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, saraakiil ka socotay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, si ay u yeeshaan kulan is-dhexgal ah oo ku saabsan badqabka iyo amniga Suxufiyiinta. Booliska iyo Saxafiyiinta ayaa sidoo kale ka wada hadlay ilaalinta Saxafiyiinta iyo sidii loo heli lahaa saxafiyiinta xiliga dhibaatada.
Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir, Col. Saciid Baryare, ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay u leedahay Saxaafadda xorta ah ee Soomaaliya, isagoona sidoo kale cambaareeyay falalka tacadiyada ah ee ka dhanka ah Suxufiyiinta ka hawlgala dalka. Waxa uu ugu baaqay saxafiyiinta iyo ururada saxaafadda in ay soo sheegaan cid kasta oo xuquuqdooda lagu xad-gudbo xataa haddii ay ku kacaan saraakiisha sar sare ee booliska.
“Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkaan idinla joogno oo aan ku soo biirno wada hadalkaaga. Waxaan arkaa inaad na dhaleecayseen, Xidhiidhka ka dhexeeya booliiska iyo warbaahinta ayaa had iyo jeer ahaa mid aad u xun. Mararka qaarkood waxaan ka baqeynaa warbaahinta. Waxaan rabnaa inaan taas baddelno, diyaarna waan u nahay,” ayuu yiri Col. Baryare, oo yiri “Saxaafad mas’uul ah oo madax-bannaan ayaa ah tan kobcisa dimuqraadiyadda dalkeenna.”
Gebagebadii tababarka ayaa waxaa ka hadlay Safiirka Britain, Kate Foster, iyo Xoghaayaha Guud ee SJS, Cabdalle Axmed Muumin, oo uu ku wehliyo Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir, Col. Saciid Baryare, iyagoo shahaadooyin guddoonsiiyay ka qaybgalayaasha iyo sidoo kale kuwii ku guuleystay. ee abaalmarinta warbixinta isbaddelka cimillada.
“Waxaan si aad ah ugu mahadcelineynaa safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho, oo nala garab taagan tahay wakhtiga ku habboon.
Waxaan u mahadcelinayaa Danjire Kate Foster, iyo kooxdeeda oo nagu deeqay dhaqaalaha lagu tababarayay 30 Wariye oo ka kala yimid dhammaan Soomaaliya: Muqdisho, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle,” ayuu yiri Xoghayaha Guud ee SJS, Cabdalle Axmed Muumin.
sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saraakiisha booliiska ee nagu soo biiray Wkhtigooda, Waxaan ugu baaqayaa taliye Siciid Baryare, iyo kooxdiisa in ay ilaaliyaan suxufiyiinta oo ay baaritaanno ku sameeyaan dilalka loo geysto suxufiyiinta Soomaaliya.”
Danjire Foster, ayaa ku nuuxnuuxsatay in Soomaaliya, oo xasiloon ay u baahan tahay isla xisaabtan iyo xorriyadda hadalka oo qalbigeeda ku jirta iyadoo ku ammaantay dhammaan geesinimada iyo go’aan qaadashada suxufiyiinta Soomaaliyeed, si ay u gutaan shaqadooda iyadoo ay jiraan caqabado badan.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta martigeliyo soo dhaweyntan, anigoo isu keenaya qof kasta oo ka qaybqaatay tababarka warbaahinta UK ee la taageeray sannadkii hore.
Waxaan aad uga walaacsanahay dhibaataynta iyo weerarrada lagu beegsaday saxafiyiinta halkan,” ayuu yiri danjire Foster. “Sida aan la hadlay qaar badan oo idinka mid ah 18-kii bilood ee la soo dhaafay, waxaad ii sheegteen sida ay muhiimka u tahay in kor loo qaado wacyiga u dhexeeya shaqaalaha amniga iyo suxufiyiinta doorka midba midka kale iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa.
Waan ku dhageysannay, waxaana ku faraxsanahay in maanta ay nagala soo qeyb galaan saxafiyiin iyo asxaabtii dhanka amniga ee tababarkii u dambeeyay, gaar ahaan waxaan jeclahay in aan soo dhaweeyo Taliye ku xigeenka Booliska G/Banaadir Gaashaanle Sare Siciid Cali Maxamed.
Danjire Foster, ayaa sidoo kale u mahadcelisay Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed, iyo xubnahooda iyo sidoo kale macallinka Saxaafadda Maxamuud Cali, oo fududeeyay labada qaybood ee tababarka (tababarka badbaadada iyo ka warbixinta isbaddelka cimillada).
Marka la soo gabagabeeyo doorashada iyo caleema saarka Madaxweynaha cusub, SJS waxay xustay fursadda cusub ee u soo baxday in la sugo, iyo horumarinta xorriyadda saxaafadda ee Soomaaliya. Safaaradda Ingiriiska, oo kaashanaysa xubnaha saaxiibada caalamiga ah, iyo bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed, waa in ay ku riixdaa wada-hadal joogto ah oo dhex mara dawladda federaalka Soomaaliya, iyo warbaahinta oo ay ka mid tahay in la riixo wax ka baddelka sharciga Saxaafadda ee 2020.